Anatin’ny Mason’ny Tafiodrivotra: Miteny Ireo Bilaogera Ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Anatin'ny Mason'ny Tafiodrivotra: Miteny Ireo Bilaogera Ao Bangladesh
Voadika ny 23 Avrily 2018 19:17 GMT
Mety efa henonao ireo vaovao momba ilay Rivodoza Sidr izay nanimba ny faritra amorontsiraka atsimon'i Bangladesh, naka ain'olona an'arivony, ary nampifindra monina an-tapitrisany. Mety efa voavakinao ireo vaovao tanaty gazety na bilaogy ary efa hitanao ireo sary tao anaty fahitalavitra, na henonao ny tatitra mampivarahontsana tamin'ny onjampeo. Saingy tsy ho feno ny fahatakaranao ny fandravan'ilay rivodoza sy ny faharetan'ireo vahoakan'i Bangladesh raha tsy namaky ireo tantaran'ny bilaogera tao an-toerana ianao.
Mitantara ny fihetseham-pony manoloana io loza voajanahary io ireo bilaogeran'ny Nari Jibon ao amin'ny bilaongin-dry zareo amin'ny teny Anglisy, Bangladesh from our view (Bangladesh amin'ny fomba fijerinay) sy ao amin'ny bilaoginy amin'ny teny Bangla, Amader Kotha.
Mitantara ny niainany tao amin'ny renivohitra Dhaka i Kazi Rafiqul Islam:
“Tapaka ny herinaratra teo amin'ny 10:15 alina teo (Alakamisy) noho ny rivotra mahery. Avy eo aho nankany am-pandriana saingy tsy nahita tory satria nihanahery be ny fifofofofon'ny rivotra….. Tamin'ny 2:00 maraina aho nahazo antso avy amin'ny zoky vavy matoako izay tany amin'ny tranon-drahavaviny tany amin'ny tanànan'i Barisal. Nampandre izy fa tandindomin-doza be ry zareo. nasidin'ny rivodoza ny tafon-trano (tafo tôle) ary voavonjy izy ireo. …..Niantso ny zandriko fara vavy tany amin'ny vohitra aho. Nampandre ahy izy fa tsy maninona saingy maro ireo hazo potika sy nazeran'ny Rivodoza…. Teo amin'ny 2:30 maraina teo naheno feo mafy tao ivelany aho. Nijery tao ivelany aho ary nahita fa nianjera teo amboninà trano mitafo fanitso ilay hazo kininina ary mivazavaza ny olona.
Koa satria tsy nisy herinaratra dia tsy afaka namelona ny fahitalavitra na ny Onjampeo aho nandritra ny tontolo andro (Zoma). Tsy afaka niantso ireo olona voakitiky ny rivodoza izahay satria tsy afaka namahana ny finday.…. Koa tafasaraka tamin'izao tontolo izao izahay. Lasa tanàna haolo ny tanànan'i Dhaka amin'ny alina. Tsy nanana herinaratra izahay, tsy nanana rano; tsy afaka nandro ary maro koa ireo olona tsy afaka nahandro sakafo satria tsy nisy rano.”
Nisy tranga sy faneoankevitra mitovitovy amin'izay navoakan'ireo mpandray anjara hafa ao anatin'ny Nari Jibon:
Sofia Khatun [bn]: “An-tapitrisany ireo olona tsy afa-manoatra ao Bangladesh. Miangavy anao hanome tànana.”
Zannat Ara Amzad Liva [bn]: “Miainga ny fanontaniana ato an-tsaiko hoe fa nahoana no ankizy tsy manan-tsiny, vahoaka farany izay mahantra no hitsakitsahan'ity hatezeran'ny zavaboary ity?”
Irin Sultana [bn] “Mbola voakasiky ny filàn-drano, sakafo, akanjo ary fanafody ireo vahoaka voakitiky ny rivodoza. Nahatonga olona maro ho lany vola ity rivodoza ity.”
Laily Jahan Meghla [bn] “ny vaovao nampalahelo mafy ahy dia nisy zazavavy teraka ny 15 Novambra maraina tao Shariatpur ary maty ny alin'io nandritra ny tafiodrivotra.”
Taslima Akhter “Tanaty tahotra no nandalovanay iny alina iny. Narary izaho sy ny fianakaviako satria tsy maintsy lenan'ny orana”
Miresaka momba ny faharetana faka tahaka nasehon'ireo mpiasa sy mpianatra ao amin'ny Nari Jibon ny Dr. Kathryn Ward, tale mpanatanteraky ny Nari Jibon. Mbola niakatra tany am-piasàna ihany ny mpiasa sy ny mpianatra ny Sabotsy mba hiasa sy hianatra na dia tsy ampy mihitsy aza ny herinaratra sy ny aterineto. Namoaka vaovao tsy an-kiato momba ny toejavatra sy ny ezaka fanampiana ihany koa izy.
Maneho an-tsary ny fomba niatrehan'ireo mponina any ambany tanànan'ny renivohitr'i Dhaka ireo fahasimbàna nentin'ilay rivodoza sokajy faha-3 tany amin-dry zareo ny MG Rabbany Sujan. Namoaka tatitra vaovao hafa izay nasongadina tao amin'ny CNN mihitsy i Sujan. Nanaovana fanadihadiana tao amin'ny CNN koa i Rafiq na dia ratsy aza ny fifandraisana an-taribihy.
Mamoaka sary sy vaovao momba ny ezaka fanampiana ataon'ireo vondrompiarahamonina ao an-toerana koa i Sujan.
Ny Zoma lasa teo, nikarakara fiofanana momba ny lahatsary sy ny fakàna sary dizitaly ho an'ireo bilaogera vehivavy ny tetikasa Nari Jibon. Milaza ny mpandray anjara, Shirin Sultana:
Nankafy be ity fiofanana ity aho ary tena faly nandray anjara tanatin'ity tetikasa ity. Mieritreritra ny hividy ny kamerà dizitaliko aho mba hahafahako maka sary marobe avaty Bangladesh, ary tiako haseho ny hatsaran'i Bangladesh.
Vakio ireo fanehoankevitra hafa an'ireo mpandray anjara.
Ity misy lahatsary navoakan'ny mpiasa ao anatin'ny Nari Jibon ny Jolay lasa teo, mampiseho ny tondradrano any amin'ireo faritra iva indrindra ao Dhaka, ilay renivohitra. Tsy ho ela dia hahita sary sy lahatsary maro hafa avy amin'ireo mpandray anjara nanatrika ireo atrikasa farany isika.